U-Lily O'Briens - IntoKildare
Yasungulwa ngo-1992 ekhishini laseKildare likaMary Ann O'Brien, uLily O'Brien's ungomunye wabakhiqizi bakashokoledi abahamba phambili e-Ireland.
Ama-Chocolates ka-Lily O'Brien aqala impilo njengongqondongqondo ka-Mary Ann O'Brien okwathi, ngemva kokuba eseluleme ekuguleni okuwohlozayo ekuqaleni kwawo-1990, wathola uthando lwakhe lwangempela ngazo zonke izinto zikashokoledi. Eqala uhambo lokuthola ulwazi, uMary Ann wacija ikhono lakhe lokwenza ushokoledi phakathi kwabapheki abasezingeni lomhlaba nabashokoledi eNingizimu Afrika naseYurophu ngaphambi kokuqala ibhizinisi lakhe elincane ekhishini lakhe laseKildare ngo-1992.
Uma ungumuntu othanda ushokoledi qiniseka ukuthi uhlala ubhekile isitolo sezimpahla eziphumayo e-Kildare Village. Kungumbono ngempela ukuwubuka kanye nepharadesi likashokoledi!
Green Road, Newbridge, Isifunda iKildare, Ireland.